SIDA LOO KORO CANAB EE URAL: DHIRTA IYO DARYEELIDDA BERRY EE XAALADAHA DHAXAN - CANAB
Sida loo koro canab ee Ural: dhirta iyo daryeelidda berry ee xaaladaha dhaxan
Wineedka sii kordhaya muddo dheer wuxuu ahaa mudnaanta ay leedahay dalalka koonfurta. Xaqiiqdu waxay tahay in beerahaas loo tixgeliyo inuu yahay heer kulul. Laakiin thanks to shaqada ee jajabiyey, beerista canab ee Ural, beerto iyo beerashada waxay noqotay mid dhab ah. Hadda viticulture ma aha oo kaliya si fiican u horumariyo dhulka ku Ural, laakiin sidoo kale muujinaysaa isku-dhafan wax soo saar sare.
Ma taqaanaa? Canab waa dalag qadiimi ah. Sida laga soo xigtay saynisyahannada, hordhaca dhaqanku wuxuu ka bilaabmay waddamada Aasiya (Pakistan, Iran). La helay hieroglyphs Masar oo sawiray caleemaha iyo rucub canab ah. Tani waxay muujinaysaa in kumanaan sanadood kahor loo aqoonsaday dalag beerasho oo faa'iido leh.
Canab ee Ural: doorashada ee kala duwan ee sii kordhaya
Qodobbada ugu muhiimsan ee doorashada ee noocyo canabki Ural waa caabbi baraf ah iyo Bisaylkiisa hore. Way ka fiican tahay in la doorto noocyo kala duwan. Waxay ku habboon yihiin xaalado cimilo qaas ah. Kordhinta baadiyaha iyo dalaggu waxay ku xiran tahay tayada dhirta Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la go'aamiyo haddii aad u baahan tahay miis ama farsamo farsamo. Marka hore waxaa loogu talagalay cuntada iyo iibinta, iyo tan labaad - in la sameeyo khamri. Marka aad dooratid, fiiri fiirinta safka. Waxaa ka wanaagsan inaad ka iibsato growers oo la xaqiijiyey kuwaas oo sii kordhaya muddo sanado ah. Waxaa loo tiiriyaa geedo wanaagsan oo leh caleemo badan. Noocyada ku habboon daaqa 100-130 maalmood oo u diirran barafoobka -40 ° C. Noocyo qabow oo u adkaysta Cagaarka:
"Samokhvalovich" - hore (110 maalmood);
"Olga" ama "Beauty of the North" - bilaw (110 maalmood);
"Negro" - dhexdhexaad ah (125 maalmood);
"Lydia" - bilawga hore (125 maalmood);
"White Muscat Shatilova" - bilawga hore (130 maalmood).
Canab ee koonfurta Ural waa mid aad u jilicsan, beeritaanka iyo daryeelka ay ubaahan tahay daryeel gaar ah iyo foosha mulkiilaha. Daryeelka haboon, natiijadu ma qaadan doonto muddo dheer.
Su'aasha ah sida loo koro canab ee Uralayaasha bilowga ah waxaa laga yaabaa inay ka soo baxaan dad badan oo raba in ay ku biiraan viticulture, laakiin aan lahayn khibrad arrintan ku saabsan. Oo waxaa haboon in la bilaabo kaliya dhowr nooc. U diidaan dhadhanka iyo midabka. Marka aad dooranaysid sapling, fiiro gaar ah u leh xididka aan la dhaafin. Waxaa fiican inaad doorato geedo kuwaas oo nidaamka xididkoodu ku jiro bac caag ah. Ma gaajoon doonaan mana qaadan doonaan xidid marka ay soo degayaan. Marka xilliga goosashada la yimaado, waxaad go'aamin kartaa nooca noocyada kala duwan ee aad ugu fiican. Sannadka 6-7aad oo kaliya ayaa waxaa jira fursad ay ku arkaan dhammaan dhalidda kala duwan. Iyada oo ku xiran tayada canab, waxaad u guran kartaa ilaa 8 kg dalagga beeraha.
Ma taqaanaa? Kuwa bilowga ah noocyo ku habboon: "Aleshenkin", "In Memory of Shatilova", "In Memory of Dombrovskaya". Ma ahan kuwo xamaasad leh mana u baahna daryeel gaar ah.
Canab ee koonfurta Ural ah si degdeg ah u helaya caan ah, noocyo kala duwan ayaa badanaa la yaqaan waxaana badanaa u muuqda kuwo cusub. Horeba waxaa jira ilaa 500 nooc. Waxaa ka mid ah, meel gaar ah waxaa lagu hayaa noocyada aan ahayn kuwa u nugul cudurada fangas.
Noocyada canab beerto ee Ural
Marka noocyo kala duwan la doorto, su'aalo badan ayaa soo baxa. Mid ka mid ah, sida loo abuuro Canab ee Ural. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto meesha ugu haboon ee loogu talagalay degidda iyo diyaarinta godadka dhulka. Mabda 'ahaan, dhaqankan wuxuu ku kobcin karaa meel kasta, haddii si fiican loo daryeelo. Laakiin goosashada la filayo waxay noqon doontaa mid yar. Canaan lagu beero Ural waa suurtogal waana mid dhab ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la iibsado sapling tayo leh iyo raacaan xeerarka beeritaanka.
Wax soo saarka baadiyaha waxay kuxirantahay meesha lagu beeray. Goobta la doortay waa inay ahaato sida qoraxda, qallalan oo u furan sida ugu macquulsan. Carrabku waa dabacsan yahay, nafaqo leh. Way ka fiican tahay in la beero sapling meel ka fog geedaha si taajka u ma xiirto, iyo xididada ma tarti leh xididdada canab. Xirmooyinka waa in laga ilaaliyaa boodhka, haddii ay ku bexeen wadada, iyo digaaga iyo xayawaanka. Biyaha hoose waa inaysan kudhowin dhulka. Meesha ugu fiican waxay ku taalaa dhinaca koonfureed ama koonfur-galbeed.
Diyaarinta ceelka beerto ayaa la sameeyey 2 bilood ka hor laga beerto abuuritaanka (March-April). Cabbirkiisu waa 1 mx 1 m. Ceelka ayaa la waraabiyaa dhowr jeer si ay u degaan una xoojiyaan ciidda. Sand, humus waxaa lagu shubay hoose, ciidda bacrin ah isku qasan leh fosfate iyo Bacriminta potash lagu daray. Ka dib 2 bilood ah sapling waxaa lagu beeray god diyaarsan. Dhulka waa la tampered oo waraabiyaa. Haddii Bacriminta lagu dabaqay wakhtigii beerto ee yaamayska, ka dibna sanadka ugu horeeya ee seedling aan la bacrimiyey.
Masaafada u dhexaysa duurka waa in ay ahaataa ugu yaraan 2.5 mitir, oo leh korniinka, waa inaysan dhexdhexaadin. Masaafada u dhaxaysa saf - 2 mitir. Fogaanta ka timaadda dayrarka waa ugu yaraan 1 mitir oo ah biqilka xididka wanaagsan.
Sida loo xanaaneeyo canab ee Ural
Beeridda iyo daryeelida canab ee Ural waxay u baahan tahay ciriiri iyo dareen. Canabku maaha mid ka cabsanaya baraf, sida qulqulka qoyaanka. Xayawaanka waxay noqdaan kuwo madow oo ka sii daraya, iyo xididada xididka. Laakiin, inkastoo ay u dulqaadashada abaarta, iyada oo la'aanta qoyaan ay u koraan liidashada iyo dhirta miraha. Sidaa darteed, kahor waraabinta, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo in noocyada kala duwan ee la doortay ay u baahan yihiin.
Ku qanacsanaanta sifooyinka wanaagsan ee daryeelka iyo abuurista xaalado wanaagsan oo loogu talagalay beerista noocyo kale oo canab ah, sida Original, Kishmish, Veles, Nizina, Talisman, Bazhena, Vostorg, Sofia, Lancelot, Arcadia, Sphinx, Rumba, Zabava, Ruslan, Sensation, Codreanca, Chameleon, In Memory of Negrul, Preobrazhenie, Avgustin, iyo Laura "- talaabada ugu horeysa ee goosashada qani ku ah miro kulul.
Sida loo canbaawin karo cana Ural
Xannibaad tayo sare leh oo sii kordhaysa ee Koonfurta Ural ku xiran tahay nidaamyada waraabinta. Cimiladu waa qaar kedis ah, waana suurtagal in la saadaaliyo waxa laga filayo roobka. Beerashan uma dulqaadanayo qoyaan xad-dhaaf ah, abaarta sidoo kale waxay si xun u saameeysaa soo-saarka iyo koritaanka. Inta lagu jiro xilliga ubax, waraabinta ma aha mid macquul ah.
Marka hore, ka dib beerashada, seedling waxaa la waraabiyaa mar toddobaadkii. Ka dibna, daawashada muuqaalka geedka, waraabinta waa qaali todobaadyo kasta. Waa lagama maarmaan in la sameeyo tan fiidkii iyada oo biyo badan oo diiran ka hooseeya xididka. Waraabka rootida dheeraadka ah ayaa sidoo kale jecel. Warshad qaangaar ah ayaa u dulqaadaysa abaaraha si fudud oo keliya. Laakiin waraabinta waa in si joogto ah loo sameeyaa, sababtoo ah muuqaalka canabku wuxuu u eg yahay mid caafimaad leh, laakiin xooga goosashada wanaagsan ma sii jiri doonto. Waxaa loo dulqaadanayaa biyaha taagan. Markaad dooranayso meel, fiiro gaar ah u yeel meesha ay ku taal dhulka biyaha. Isticmaalka qoyaanka waxa sababa cirridka iyo cudurada.
Waa muhiim! Canab on top of caleenta kuleylka laguma waraabin karo. Caleemaha la jarjaray ayaa ka soo baxa qorraxda tooska ah. Inta lagu jiro ubax sabeyn canab ah waxay keenaysaa ubax in ay dhacaan.
Si mulch ah ee ciidda, waxaa wanaagsan in laga tago cawska la isku qaboojiyey dhow xidid ama ciid beedka cagaar. Inta lagu jiro ubax, baahida loo qabo qoyaanku waa mid aad u yar, waxaana laga yabaa in lagu jimicsado si loo yareeyo ama gabi ahaanba looga saaro waraabinta. Baahida loo qabo inay dib u bilowdo inta lagu jiro buuxinta berry. Dhowr usbuuc ka hor goosashada, biyaha ayaa mar kale joojiya. Waraabinta biyaha waraabinta waxaa lagu fuliyaa inta lagu jiro diyaarinta beertii canabka ahayd ee jiilaalka.
Ka dib goosashada waa in si fiican loo waraabiyo (20 litir oo biyo ah 1 baadiyaha). Tani waxay u ogolaanaysaa jiilaal fiican. Laakiin haddii ciidda on dalagyada la beeray waa clayey, ka dibna waraabinta noocan oo kale ah waxay noqon kartaa waxyeello. Sidoo kale looma isticmaalo meelaha ay ku yaallaan biyaha dhulka hoose. Meelahaas oo kale, waraabinta biyaha waraabinta waxaa la qabtaa 1 mar sanado dhowr ah oo leh qulqulaad qoto dheer oo ciid ah.
Hababka caadiga ah ee daryeelka carrada waxaa ka mid ah haraaga madow. Waxay ka caawisaa in carrada lagu daboolo oo aan haramaha lahayn. Habboon ee ay duurka dhalinyarada, iyo horay u fruiting. Inta badan ee dabacsanaanta waxay ku xiran tahay xaaladda carrada iyo waraabka. Haddii ciidda si dhakhso ah loo dhaqmo, loosening waxaa lagu sameeyaa marar badan. Seddaxdii sanoba hal mar, waa inay noqotaa mid cadaan ah oo madow ah oo la gooyo dhaqanka dareenka. Isticmaalka joogtada ah ee beerashada ayaa si xun u saameyn kara midhaha iyo xaaladda miraha guud ahaan.
Hababka ugu caansan ee viticulture ee Urals waxaa ka mid ah mulching ciid, taas oo ka dhigaysa suurtagal ah in si wax ku ool ah u dagaallanka ciidda iyo hayn qoyaan. Wixii mulching isticmaali cawska, balka, compost, iwm. Waxaa loo dhigaa inta u dhaxaysa saf, laakiin tani waa hab hawleed. Waxaa fiican in la isticmaalo mulch la beertay, si aanay u helin jiirka.
Isticmaalka dhaqanka dabiiciga ah ayaa sidoo kale saameyn togan ku leh carrada. Kordhi arrimo dabiici ah, hagaajinta sifooyinka jirka iyo kiimikada ee ciidda, ka hortagga nabaad guurka. Dhaqamada kala duwan waxay u baahan yihiin qoyaan badan. Sidaa darteed, marka la isticmaalo, beerta canabka ah waa in la siiyaa biyo badan.
Waa muhiim!Digada cagaaran waxaa loo isticmaalaa beero canab ah 6 sano jir. Nidaamka asaasiga ah ee canabka dhalinyarada ah looma horumarin ku filan inuu u dagaalamo qoyaanka iyo nafaqooyinka leh digada cagaaran.
Saltuber, Bacriminta potash, superphosphate iyo Bacriminta dabiiciga ah waxaa loo isticmaalaa dharka ugu sareeya. Quudinta ugu horeysa waxaa la fuliyaa bilowga Maajo, labaad ee dhamaadka.
Ma taqaanaa? Haddii, marka laga beerto geedo canab, Bacriminta ayaa isla markiiba codsaday ciidda, bacarimis canab ah saddexda sano ilaa afar sano aan loo baahnayn.
Way fiicantahay in la bacrimiyo iyada oo digada, waxay leedahay faragal waxtar badan oo faa'iido leh oo ka badan Bacriminta inorganic. Isagu kaliya ma quudiyo xididada beerta canabka ah, laakiin sidoo kale waxay dabacsan tahay ciidda. Ku darso dharka sarreeya ee dharka leh iyo waraabinta canab. Caleemuhu waxay u nuugaan nafaqooyinka si fiican. Wixii ka hortagga ugxan iyo dhicin ubax caleenta caleenta waxaa lagu buufin karaa xalka iyada oo la socota xubno ka hor muuqaalka ubaxa. Mar labaad - ka dib markii ubax. Saddexaad - marka bislaado. Dharka ugu sarreeya ma aha oo kaliya hagaajinta beergooyska, laakiin sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xooga ka hor intaysan su'aashu bilaabin.
Iyadoo ay ku xiran tahay saamiga iyo tirada kaararka ee qeyb ka mid ah digada, ee bacariminta canab, waxaad isticmaali kartaa ido, faras, bakayle, doofaarka iyo digada lo'da.
Muuqashada iyo qanjirada
Daryeelka sabiibta muddada xagaaga ee koritaanka waxaa la sameeyaa adoo hindhisaya iyo jiidaya. Xeerarka Pationkovy ee baadiyaha awoodda, hawo-gelinta iyo iftiinka. Si kor loogu qaado koritaanka tallaabooyinka guga hore, marka caleemaha gaaraan 15-20 cm, dushooda oo jiido. Qanjaruufo ayaa laga saaray kaliya dushooda caleemaha. Waxaa la soo saaraa inta lagu jiro ubax.
Canab dhoobo ah ee Ural ayaa loo baahan yahay si loo hagaajiyo midho dhalinta, u saxo qaabka iyo baaxadda baadiyaha, oo ka dhigi kara suurtagal si loo yareeyo xannaaneynta geedka. Waxaa la caddeeyay in si joogto ah oo ku haboon manjooyin, dhadhanka ah ee berry iyaduna kor u kaca iyo xajmigooda kor u kaca. Geeddi ugu horeysay ee canab waa la sameeyaa guga ee Ural. Badanaa laga bilaabo badhtamaha Maarso. Heerkulku waa inuu ka hooseeyo +5 ° C
Sidoo kale, geedi socodka manjooyin waa in aan la bilaabin, sida socodka dheecaanka bilaabmaa guga. Iska yaree dhammaan gacmo-qabyada aan caleemaha siin. Koofiyadaha noocaas ah ayaa la gooyaa inta lagu jiro xilliga oo dhan. Canab dhoobo ah xilliga deyrta ee Ural waa ay ka duwan tahay waddamada koonfurta. Sannaddii kowaad oo aan la sameeyey - baadiyaha xagaaga xagaaga kor u kacay wax ka sareeya 0.5-1 mitir. Sannad ka dib, gooyay qaybta geedaha geedka canabka ah. Caleemo lihi waa la saaraa, oo ka tagta kan ugu xooggan.
Daaweynta canabkiisa cudurada iyo cayayaanka
Cudurada waxay u qaybsan yihiin xilliyada iyo daba joogta. Dalagyada beeraha ayaa ku xiran cuduro kala duwan. Haddii aadan sameynin daaweynta ka hortagga cudurrada iyo cayayaanka, goosashada ayaa aad u saameeya. Viticulture waxay u baahan tahay fiiro gaar ah iyo wax-qabad waqtiga ah. Cudur lagu soo shubay ama aan la burburin waqtiga cayayaanku wuxuu burburinayaa dalagga iyo baadiyaha guud ahaan.
Si looga hortago dhimashada geedka, daaweynta prophylactic waa la fuliyaa. Daaweynta asaasiga ah, ka dib marka la gooyo guga, oo leh sulfate birta (300-500 g halkii 10 l oo biyo ah). Secondary, oo leh barar kelyaha - "Aktely". Xilliga Abriil ama horraanta May, waa Horus (12 g halkii 10 litir oo biyo ah), daaweynta afaraad waxaa la sameeyaa ka hor inta ubax: Ridomil Gold MC (ama Acrobat MC) - Topaz (ama Strobe) - "Actellic". Daaweynta shanaad waxay dhacdaa marka uu berrito ku jiro marxaladda: "Ridomil Gold" - "Topaz" - "Aktelli".
Noocyada canab koraya ee Ural: sida loo daboolo geedka jiilaalka
Canabada hoyga ee jiilaalka ee Ural - shaqada lagama maarmaanka ah, taas oo go'aamisa sii noolaanshaha baadiyaha. Haddii aadan raacin xeerarka, ama ha daboolin - geedka ayaa dhiman doona. Baraf aad u daran wuxuu burburin doonaa suufka aan la ilaalin iyo nidaamka xididka. Waa lagama maarmaanka ma ahan oo kaliya inaad u hoggaansanto xeerarka cad ee hoyga, laakiin sidoo kale waxay tixgelineysaa sifooyinka goobta.
Gooyo iyo hoyga canab soo saaro xilliga dayrta. Ka hor inta aan la diyaarin jiilaalka, dalagga oo dhan waa la goostay. Xididada xididada oo ay biyo badan ku jiraan. Haddii biyuhu ku shubaan baaldiyada, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo mudo yar. Dareerka waa in si buuxda loo nuugo dhulka, waa in aysan jirin wax cilad ah. Qoyaanku wuxuu galaa qoto dheer ee ciidda, iyo guurka ciidda jiilaalka kor u kaca. Sidaa darteed, ciidda iyo xididdada geedka waxaa lagu kululeeyo. Hawlgalku waa waqti, laakiin waa lagama maarmaan.
Waa muhiim in la ogaado marka ay lagama maarmaan tahay in lagu daboolo canabkiisa Ural. Waa inaan ku bilownaa dhaxan ugu horreeya. Laga bilaabo bartamaha bisha ama xitaa Diisambar. Markii hore waa wax aan macquul aheyn, sababtoo ah caaryada waxaa laga sameeyaa kelyaha laga bilaabo qoyaan. Geedka canabka ahna waxaa lagu dhejiyey sir badan oo dahab ah. Ku dabool tarpaulin. Waxaa mar hore la xaqiijiyay in filimka, kaas oo daboolaya duurka, waa midab cad ama midab khafiif ah. Hooska, heerkulka ayaa weli 1.5% ka sareeya. Waxaa loo isticmaalaa in la rumaysto in ay ahayd madow in hayn iyo soo jiidasho kuleylka. Maqnaanshaha barafka tooska ah ee xilliga jiilaalka waxaa loo isticmaalaa sidii kulaylka dheeriga ah Haddii ay duurka u yaryihiin, geedka canabka ah waxaa lagu duubayaa giraan ah oo lagu daboolay sanduuq ama baaldi sare.
Waad ku mahadsan tahay xayawaanka aadka u wanaagsan, viticulture ayaa laga heley gobollada woqooyiga. Sida loo koro canab ee Urarrada ma aha arrin muhiim ah. Waxay noqotay mid dhab ah. Iyadoo beeritaanka habboon iyo daryeelka ee dalagga this, waxaad ku guuleysan kartaa goosashada wanaagsan. Sanadihii la soo dhaafay, isbeddelka soo saaridda ayaa si weyn u koray, iyo tiro badan oo kala duwan oo kala duwan, oo ay ku jiraan noocyo hybrid, ayaa u muuqday.